Kuxwayiswa imiphakathi ngamavideo adicilela isithunzi | News24
Kuxwayiswa imiphakathi ngamavideo adicilela isithunzi
OKHULUMELA amaphoyisa ePlessislaer uKapteni Musa Ntombela usehlabe ikhwelo emiphakathini ukuba iyeke ukuqopha bese isabalalisa imifanekiso edicilela phansi isithunzi ezinkundleni zokuxhumana.
Lokhu ukusho emva kokusatshalaliswa kwe-video yentombazanyana elinganiselwa eminyakeni engu-15 yasendaweni yaseMaswazini e-Elandskop, ebonakala iqhutshwa amalungu omphakathi ihambaze.
Le ntombazanyana esolwa ngokwenza ucansi nomfana wendawo emzini womuntu engekho ibonakala iqhutshwa amalungu omphakathi ngemuva, namanye ehamba phambi kwayo eqopha lesi gameko.
Yize kungezwakali kahle, kodwa ayezwakala amanye amalungu omphakathi eyibuza ukuthi eyakuphi futhi yenzeni.
UKapteni Ntombela uthe yize lingekho icala elivuliwe ngalesi sogameko, amalunga omphakathi ayanxuswa ukuba ayeke ukudicilela isithunzi sabanye ezinkundleni zokuxhumana, ngoba bangazithola sebefakwe amacala okusabalalisa izithombe zocansi.
Ilungu lomphakathi elikhulume nephephandaba i-Echo kepha elingathandanga ukudalulwa lithe lesi sigameko senzeke ngeledlule, lapho le ntombazane nomfana wendawo bengene emzini womuntu obuvuliwe, kungekho muntu, othe uma ebuya wazithela kubona. Lo owesilisa ukwazile ukubaleka. Uthe yize intombazane ibe sephutheni, amanye amalunga omphakathi awasijabulelanga lesi senzo, ikakhulukazi ngoba abanye abebeqopha ivideo bangaba abazali kule ntombazane.
Usihlalo wenhlangano evikela amalungelo abantwana ebizwa nge–International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect uNksz Joan van Niekerk uthe: “Njengenhlangano evikela amalungelo ezingane zishaqekile kakhulu ngale senzo sobulwane. Amalungu omphakathi abeqopha le video kumele azi ukuthi icala leli njengoba bengatholakala necala lokugcina imifanekiso yocansi olwenziwa izingane (child pornography).
“Noma ngabe kuthiwa laba bobabili bangene emzini womuntu ngaphandle kwemvume, ukumehlisa isithunzi emphakathini bekungeyona indlela yokulungisa isimo. Uma ngabe bebengene emzini womuntu ngokungemthetho, bekumele umnikazi amnike ithuba lokuba agqoke amhambise emaphoyiseni ukuze kube yiwona abhekana naye.
“Lo mntwana kuzomele athole ukululekwa njengoba ehlukumezeke kakhulu ngokwengqondo. Zikhona izinhlangano ezinjengoChildline ezibhekelele ukuvikela amalungelo ezingane.”
Ikhansela lakwa ward 8 uMnu Bethwell Ngcobo uthe uyazi ngalesi sigameko futhi kuhlelwe ukuthi kube nomhlangano nemindeni ethintekayo ngempelasonto.
“Ngidumele kakhulu ngalesi sigameko, ngiyanxusa ukuba abantu bawuyeke lo mkhuba wokuqopha amavideo afuze lawa. Lobu ubulwane obuphindiwe futhi abamukelekile.
“Sizozama ukuthi leli vangeli silishumayele nasemihlanganweni yomphakathi,”kusho uNgcobo